Zuva: 7 October 2019
Kufukunura kukuru uye basa repasi peElmali Bus Terminal chirongwa, icho chichave chakavakwa neAntalya Metropolitan Municipality, chave kutanga. Iyo terminal, iyo ichagadzira iyo yayo yemagetsi kuburikidza ne solar panels, inomira pachena neyakaipirwa nharaunda. Antalya Metropolitan Municipality kuna Elmali mutsva [More ...]
Kunonoka Mabhasi Anotarisirwa KuUKOM
Zvokufambisa Coordination Center (UKOM), yakagadzwa neazvino matekinoroji maturusi mukati meDhipatimendi Yezvekufambisa uye Trafiki Management yeKocaeli Metropolitan Municipality, inoshanda nekutarisa uye kuongorora nheyo ye7 / 24. Makamera anoiswa panzvimbo dzakakosha anogara achitariswa uye zviziviso kubva kuvagari [More ...]
Ormanya'da Park Dambudziko Haizorarama
Natural Life Park, inogamuchira vashanyi vazhinji kubva kumatunhu akavakidzana eKocaeli nekune dzimwe nyika, inokwezva kwazvo vanhu vanobva kure kusagadzikana uye vanoda kushandisa nguva mune zvakasikwa. Zuva kubatana uyewo vashanyi kubva Turkey uye nenyika Ormanian [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality hairegi kushongedza nzvimbo idzi nekutora nzvimbo mushure mekupedza mabasa akadai semigwagwa, anodarika nepakati. Park Gadheni uye Green Areas Dhipatimendi rakapedza iyo nzvimbo yakasvibira uye mavara ane mavara kune mapurojekiti [More ...]
nhengo Turkey akawanda Demiryolc Children Group kubva mumatunhu akawanda, guta Selcuk Aydin akasangana pachiteshi miziyamu muguta summerhouse. Vanenge vanhu ve200 muRailroad Vana Group ravakaumba pamasocial media vanosangana kuCamlik Steam Locomotive Museum nezve 40 makore apfuura. [More ...]
Mazuva e15 kubva pakuuya kuhofisi… 14 Highways kuBursa kwenguva. Pahurukuro parunhare na Öner Özgür, aishanda seManeja wedunhu uye zvino achishanda soMubatsiri General Manager achitarisira mari kuTCDD, takabvunza: ca [More ...]
Nhasi, uko zvitima zvekumhanya zvakanyanya zvawanda, China inoramba ichishanda zvisina basa kune zvitima zve maglev zvine prototype yavo yakaunzwa mumwedzi ichangopfuura. Mune mamiriro aya, kuedza kwekutanga kuchaitwa pakutanga kwe2020. China inogara iri nyika inokurumidza kusvika panjanji nezvitima [More ...]
Yekumhanya Yechikuru Fare Kusimudza. Mabasa anopihwa nevakabatana uye anoenderana mamwe madhizaire eSevhisi yeZvekutakura nezvivakwa akawedzerwa ne20. Tsananguro yekutanga yakabva kune General Directorate ye Highways. Migwagwa mikuru, mabhiriji uye [More ...]
Mutungamiri Erdoğan Murayiridzo Wokutanga Chiteshi Istanbul Project Zvino
Rega mubvunzo wezvakaitika kuKanal Istanbul chirongwa chiuye kwandiri zvino! Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan maminetsi ekupedzisira akaraira Kızılcıhamam'da. Vanoti iwe haugone kuita Chiteshi Istanbul chirongwa, basa iri rakafamba zvakareba. Channel İstanbul chirongwa chakarairwa kuti chiite nekukurumidza. CHP yakaoma [More ...]
General Directorate of Highways (KGM), nhasi (7 Gumiguru) kushanda zvakanaka mumigwagwa mikuru uye mabhiri toll paavhareji 20 muzana kuwedzera kwataurwa. Paavhareji, 7 inoshanda kune motaway uye mabhiri toll kubva muna Gumiguru kusvika 20 [More ...]
Vamiriri vemakamuri mainogadzirwa mainjiniya nevagadziri muSakarya, vakasangana nemumiriri wekambani uyo vakaita chirongwa cheRopeway muSapanca. Mubairo wakakunda Bursa Cable Mota [More ...]
Tete yakaitwa yekubviswa kwezvitima zveMarmaray kubva pagrafiti (kupenda kana kunyora muzvinhu zveveruzhinji kana nzvimbo dzeveruzhinji). TCDD Transportation Co Chiziviso cheMarmaray Operation Directorate kuGeneral Gazette chakati: "Marmaray Vehicle Maintenance Service [More ...]
Anadolu Rail Systems Cluster (ARUS), nhengo yebhodhi revatungamiriri veEuropean Rail Systems Association (ERCI), yakamiririra Turkey kuFerroviara Rail Systems Fair kuMilan, Italy. Anadolu Rail Systems Cluster Coordator Ilhami Pektas akadaro mukutaura; Milano Italy's Milan [More ...]
Meya Güngör akataura kuti gadziriro yemwaka iri kuenderera kuYedikuyular Ski Center uye akawedzera kuti: yerine Tiri kuvaka dzimba dzekutengesa nyowani dzinozopa vashanyi vedu basa rakadzikama panzvimbo pezvisingadarike zvekudya nekumwa zvivakwa mudunhu iri. Uye zvakare, kuiswa kwezvigadzirwa zvemuno muzvivakwa zvedu zvitsva [More ...]
Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) yakatanga kuferefeta nezvetsaona yemetrobus mangwanani ano. Mamiriro eanenge akakuvara zvishoma 13 mutakuri ari kurapwa anotariswa zvakanyanya. İETT, inoita mabasa anokosha kudzivirira tsaona dzakadai kuti dzisadzokere, ichaisawo Uyarı Kutanga Yevero System kune mota. [More ...]
Antalya Metropolitan Municipality Meya Chief Advisor, achitaura kuti vanoronga kugadzira monorail pakati peLiman neAntalyaspor nhandare. Cem Oguz, "Kana tikawana kwainobva nhandare ichienda kumadokero kweKundu 16 kilometer chikamu chepasi pechirongwa," akadaro. Oğuz Hop On Antalya [More ...]